FIKASANA FAKANA AN-KERINY : Dahalo miisa telo lavon’ny fokonolona tany amin’ny Distrikan’i Betroka
Dahalo telo indray no maty voatifitry ny fokonolona tao Amberomena Fokontany Irotsoka kaominina Ambalasoa, Distrikan’i Betroka. 13 août 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena dia tamin’ny zoma 09 aogositra tokony tamin’ny telo ora tolakandro no naka satrana hanamboarana tsihy i Godea, teo amin’ny toerana tsy dia mifanalavitra loatra amin’ny toerana misy azy. Raha ny fanazavana voaray dia nifanena tamin’ireo andian-dahalo efa nanam-pikasana ny haka an-keriny olona maromaro tamin’ity toerana ity, ka nifanojo tamin-dry Godea sy ny namany hafa naka hazo hanaovan-trano tamin’ny toerana avaratra tsy mifanalavitra amin’ny Amberomena.
Akory ny hatairan’ireto farany fa dahalo fito lahy mitam-piadiana no tonga nanatona sy nandrahona azy ireo fa hatao “Bohiry” izy ireo. Tsy nanaiky izany i Godea sady izy rahateo mbola nanana fotoana ahafahany mandositra tsara, moa ny toerana ihany koa isany amin’ireo toerana manavanana azy satria toerana filalaovany hatramin’ny fahakeliny.
Nandositra izy mbamin’ ireo namana ka niantso vonjy tamin’ireo zandary sy vatan-dehilahy namany tao Amberomena, ireto farany izay tsy nety nolembenana, ka raikitra ny fifandonana tamin’ireo malaso mpaka an-keriny ireo. Vokany telo tamin’ireo fito lavon’ny hokonolona izay mbola tanora erotrerony avokoa fa efatra hafa afaka nandositra. Sarona niaraka tamin’ireo dahalo maty ihany koa ny basy roa vava iray. Araka ny angom-baovao voaray avy any an-toerana ihany moa dia mahazo tombony ireo mponina ao Betroka noho ny fampianaran’ireo andiana zandary mikasika ny fiarovan-tenam-pokonolona indray mandeha isan-kerinandro ho fiarovan-tena sy fiarovana ireo fananana.